41 Ngakho kwathi ngenyanga yesikhombisa u-Ishmayeli+ indodana kaNethaniya indodana ka-Elishama+ wozalo lwasebukhosini+ futhi ongenye yamadoda avelele enkosi, yena kanye namanye amadoda ayishumi,+ beza kuGedaliya indodana ka-Ahikamu eMispa.+ Badla isinkwa ndawonye lapho eMispa.+ 2 Khona-ke u-Ishmayeli indodana kaNethaniya namadoda ayishumi ayekanye naye basukuma bambulala uGedaliya indodana ka-Ahikamu indodana kaShafani ngenkemba.+ Ngakho wambulala lowo inkosi yaseBhabhiloni eyayimmise phezu kwezwe.+ 3 Wonke amaJuda ayekanye naye, okungukuthi, ayenoGedaliya, eMispa, namaKhaledi ayetholakala lapho, okungukuthi, amadoda empi, u-Ishmayeli wawabulala. 4 Kwathi ngosuku lwesibili lokubulawa kukaGedaliya, lapho kungekho muntu noyedwa owayazi ngakho,+ 5 khona-ke kwafika amadoda evela eShekemi,+ eShilo+ naseSamariya,+ amadoda angamashumi ayisishiyagalombili ephuce izintshebe zawo+ izingubo zawo ziklebhukile futhi ezisikile,+ futhi esandleni sawo ayephethe umnikelo wokusanhlamvu nenhlaka yempepho+ ekulethe endlini kaJehova. 6 Ngakho u-Ishmayeli indodana kaNethaniya waphuma eMispa eyowahlangabeza, ehamba ekhala.+ Kwathi ngokushesha nje lapho enqwamana nawo wathi kuwo: “Wozani kuGedaliya indodana ka-Ahikamu.” 7 Kodwa kwathi ngokushesha nje lapho efika phakathi komuzi, u-Ishmayeli indodana kaNethaniya wawaceka wawaphonsa emthonjeni, yena namadoda ayekanye naye.+ 8 Kodwa kwakukhona amadoda ayishumi atholakala phakathi kwawo, lawo ngokushesha athi ku-Ishmayeli: “Ungasibulali, ngoba sinengcebo efihlwe endle, ukolweni nebhali namafutha noju.”+ Ngakho wayeka, futhi akawabulalanga kanye nabafowabo. 9 Manje umthombo u-Ishmayeli+ aphonsa kuwo zonke izidumbu zamadoda ayewabulele kwakuwumthombo omkhulu, yilowo owenziwa yiNkosi u-Asa ngenxa kaBhahasha inkosi yakwa-Israyeli.+ Yiwo u-Ishmayeli indodana kaNethaniya awugcwalisa ngababulewe. 10 Khona-ke u-Ishmayeli wathumba yonke insali yabantu ababeseMispa,+ amadodakazi enkosi+ nabo bonke abantu ababesele eMispa,+ uNebuzaradani induna yemilindankosi ayebabeke ngaphansi kukaGedaliya indodana ka-Ahikamu.+ Ngakho u-Ishmayeli indodana kaNethaniya wabathumba wahamba wawelela emadodaneni ka-Amoni.+ 11 Ngemva kwesikhathi uJohanani+ indodana kaKhareya nazo zonke izinduna zamabutho empi+ ezazikanye naye bezwa ngakho konke okubi u-Ishmayeli indodana kaNethaniya ayekwenzile. 12 Ngakho-ke bathatha wonke amadoda bahamba bayolwa no-Ishmayeli indodana kaNethaniya bamthola ngasemanzini amaningi ayeseGibheyoni.+ 13 Khona-ke kwathi ngokushesha nje lapho abantu ababeno-Ishmayeli bebona uJohanani indodana kaKhareya nazo zonke izinduna zamabutho empi ezazikanye naye, baqala ukujabula. 14 Bonke abantu u-Ishmayeli ayebathumbile eMispa+ baphenduka futhi baphindela emuva baya kuJohanani indodana kaKhareya. 15 U-Ishmayeli indodana kaNethaniya yena, waphunyuka+ namadoda ayisishiyagalombili phambi kukaJohanani, ukuba aye emadodaneni ka-Amoni. 16 UJohanani+ indodana kaKhareya nazo zonke izinduna zamabutho empi ezazikanye naye manje bathatha yonke insali yabantu abayibuyisa ku-Ishmayeli indodana kaNethaniya, eMispa, ngemva kokuba esebulele uGedaliya+ indodana ka-Ahikamu, amadoda anamandla, amadoda empi, nabafazi nabantwana abancane nezikhulu zegceke, ababuyisa eGibheyoni. 17 Ngakho bahamba bahlala endaweni yokungenisa yaseKimihamu eyayiseceleni kweBhetlehema,+ ukuze baqhubekele phambili bangene eGibhithe,+ 18 ngenxa yamaKhaledi;+ ngoba base besaba ngenxa yawo,+ njengoba u-Ishmayeli indodana kaNethaniya ayebulele uGedaliya indodana ka-Ahikamu,+ inkosi yaseBhabhiloni eyayimmise phezu kwezwe.+